Fanamelohana ny rongony any Louisiana - lalàna momba ny rongony Louisiana
Ny tantara dia namboarina vao tsy ela taorian'ny nifidianan'ny antenimieram-panjakana nifidy ny fanakanana ny rongony tany Louisiana.
Ny latsa-bato dia nifidy tamin'ny 20-17 ho an'ny House Bill 652, natolotry ny Repoblika State Cedric Glover, ny tanjon'ny volavolan-dalàna dia ny tsy fanarahan-dalàna ny fananana rongony kely hampiasaina manokana any Louisiana.
Araka ny lalànan'ny heloka bevava any Louisiana, ny fananana fanafody tsy voafehy dia manasazy hatramin'ny enim-bolana an-tranomaizina ka hatramin'ny 20 taona an-tranomaizina.
Ireto ny antsipiriany momba ny volavolan-dalàna vao haingana izay manameloka ny rongony any Louisiana:
Ara-dalàna ve ny rongony any Louisiana?
Mampalahelo fa tsia. Ny marijuana fialamboly dia tsy nekena ho ara-dalàna any amin'ny fanjakana. Tany am-piandohan'ity taona ity dia maty tao amin'ny Antenimieran'ny volavolan-dalàna ny volavolan-dalàna iray izay nanandrana nanao lalàna tamin'ny rongony.
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA LISENY BUSINESS MARIJUANA AO MAINE
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA LISENENA BUSINESS MARIJUANA AO VIRGINIA
Inona no ataon'ny volavolan-dalàna vaovao?
Ny volavolan-dalàna House 652 dia volavolan-dalàna momba ny famoahana heloka, izay midika fa manafoana ny fahafahan'ny fonja na ny fotoan'ny fonja ho an'ireo olona tratra rongony kely.
Ity volavolan-dalàna ity dia mahatonga ny fananana 14 grama na latsaky ny asa ratsy amin'ny tranga rehetra ary koa mametra ny onitra hatramin'ny $ 100, manala ny fotoanan'ny fonja.
Inona no toe-javatra talohan'ny famoahana heloka bevava ny rongony any Louisiana?
Ny lalànan'ny heloka bevava any Louisiana dia milaza fa ny fananana fanafody tsy voafehy dia mety hahatonga anao hiala amin'ny enim-bolana an-tranomaizina ka hatramin'ny 20 taona an-tranomaizina.
Ankoatr'izay, ireo meloka voalohany manana marijuana 14 na latsaka ny sazy dia voasazy hatramin'ny 300 $ ka mety higadra 15 andro an-tranomaizina.
Ireo mpandika lalàna voalohany manana maherin'ny 14 grama dia voatery nandoa hatramin'ny $ 500 ary / na higadra enim-bolana.
Afaka mividy rongony any Louisiana ve aho?
Raha ny amin'izao fotoana izao, i Louisiana dia manana programa marijuana ara-pitsaboana, izay ahafahanao mividy rongony - na dia tsy amin'ny endrika manta na azo setroka aza- amin'ny toeram-pitsaboana marijuana ara-pitsaboana izay ilainao ny manana fanafody fitsaboana.
Na eo aza izany, ny fananganana ara-dalàna ny rongony ampiasain'ny olon-dehibe dia toa tsy azo ihodivirana, ny fanontaniana tokana dia hoe rahoviana no hitranga izany.